Intengiso kuZwelonke: Isizukulwane ngasinye siSebenzise njani kwaye sisebenzisa iTekhnoloji | Martech Zone
Kuqhelekile kum ukuba ndincwine xa ndibona inqaku lisola iMillennials okanye lisenza ukugxekwa okungathandekiyo. Nangona kunjalo, akukho mathandabuzo ukuba akukho tyekelo lokuziphatha kwendalo phakathi kwezizukulwana kunye nobudlelwane babo kwitekhnoloji.
Ndicinga ukuba kukhuselekile ukuthi, ngokomndilili, izizukulwana ezindala azithandabuzi ukuthatha umnxeba kwaye zibize umntu, ngelixa abantu abancinci bezokutsiba umyalezo obhaliweyo. Ngapha koko, sinomthengi owakhele i- imiyalezo ebhaliweyo iqonga labaqeshi ukunxibelelana nabagqatswa… amaxesha ayatshintsha!
Isizukulwana ngasinye sineempawu zaso ezahlukileyo, enye yazo yindlela ezisebenzisa ngayo itekhnoloji. Ngobuchwephesha obuvelisa ngokukhawuleza ngesantya esinqabileyo, umsantsa ophakathi kwesizukulwana ngasinye ukwachaphazela indlela iqela ngalinye lobudala elisebenzisa ngayo amaqonga ezobuchwephesha ahlukeneyo ukwenza ubomi babo bube lula kakhulu - ebomini nasemsebenzini.
Zithini iZizukulwana (iiBoomers, X, Y, kunye noZ)?
I-BrainBoxol iphuhlise le infographic, I-Tech Evolution kunye nendlela esihlala ngayo sonke, ezithi iinkcukacha zesizukulwana ngasinye kunye nezinye zeendlela zokuziphatha ezifanayo ngokumalunga nokwamkelwa kwetekhnoloji.
I-Baby boomers (Wazalwa ngo-1946 no-1964) - I-Baby boomers yayingoovulindlela bokusebenzisa iikhompyuter zasekhaya- kodwa ngeli xesha ebomini babo, zingakumbi ukuthandabuza ukwamkelwa ubuchwepheshe obutsha.
Isizukulwana X (Wazalwa ngo-1965 ukuya ku-1976) -Usebenzisa ikakhulu i-imeyile kunye nomnxeba ukunxibelelana. UGen Xers ukhona ukuchitha ixesha elininzi kwi-intanethi kunye nokusebenzisa ii-smartphones zabo ukufikelela kwii -apps, imidiya yoluntu kunye ne-intanethi.
Millennials okanye isizukulwana Y (Uzalelwe ngo-1977 ukuya ku-1996) -ikakhulu basebenzise imiyalezo kunye nemithombo yeendaba zentlalo. I-Millennials yayisisizukulwana sokuqala ukuba sikhule ngemidiya yoluntu kunye nee-smartphones kwaye siqhubeke sisisizukulwana ngokusetyenziswa okubanzi kwetekhnoloji.
Isizukulwana Z, iGen, okanye i-Centennials (Wazalwa ngo-1996 kwaye kamva) -sebenzisa izixhobo eziphathwayo zonxibelelwano kunye nezinto zonxibelelwano ukunxibelelana. Ngapha koko, bakwi-imiyalezo yemiyalezo engama-57% yexesha besebenzisa ii-smartphones zabo.
Ngenxa yomahluko wabo ocacileyo, abathengisi bahlala besebenzisa izizukulwana ukujolisa ngcono kwimithombo yeendaba kunye nejelo njengoko bethetha kwicandelo elithile.
Yintoni ukuThengisa ngokuDala?
Ukuthengisa ngokubanzi yindlela yokuthengisa esebenzisa ukwahlulwa ngokusekwe kwiqela labantu abazelwe ngaphakathi kwinqanaba elifanayo lexesha ababelana ngeminyaka efanayo kunye nenqanaba lobomi kwaye babunjwa lixesha elithile (iziganeko, imikhwa kunye nophuhliso).
I-infographic epheleleyo ibonelela ngeendlela zokuziphatha ezineenkcukacha, kubandakanya ezinye ezinengxaki ezibangela ukungavisisani phakathi kwamaqela eminyaka. Yijonge…
tags: umntwana boomerboomers babyboomersikhulu leminyakacohortUhlobo yisizukulwanaisizukulwana xisizukulwana yukuthengisa ngokubanzisizukulwanauhlobouhlobokwakhonaisahluloTechnologyUkusetyenziswa kwetekhnoloji zizukulwanay
Feb 17, 2021 ngo-10: 25 PM
Ithi uGen Z "yi-200% njengabantu abanokuthetha ngefowuni ngexesha lodliwanondlebe lomsebenzi" - "i-200% ngokunokwenzeka" ifuna uthelekiso, kwaye "i-200% inokwenzeka" ithetha "ukuphindeka kabini" -okuphindwe kabini NGUBANI oza kuthetha kwiselfowuni ngexesha lodliwanondlebe lomsebenzi? kwaye ngaba oku kungudliwanondlebe okanye umntu ekwenziwa udliwanondlebe naye? Kwaye oku kuhambelana njani ne-6% kuphela yokuziva ngathi kulungile ukuthetha, ukuthumela umyalezo, okanye ukusefa ngelixa usebenza? Udliwanondlebe lomsebenzi luyasebenza… .. ukuba kuphela iipesenti ezi-6 zivakala zilungile, zeziphi iindlela eziphinda-phindwe kabini zokuba balungile xa bethetha ngomnxeba ngexesha lodliwanondlebe lomsebenzi? Oku akuyenzi nganto, ngaphandle kwemathematika !!! ?????
Feb 18, 2021 ngo-5: 48 PM
Ukuqwalaselwa okuqinileyo. Ndicinga ukuba ngebekhuselekile xa esithi… “kungenzeka”